South Africa Xhosa ICanada isebenzisa umenzi womatshini wokuvelisa isicatshulwa
Udonga lwe-aluminium kunye nepaneli yepaneli ephahleni libonakala lihle kwaye libala. Iyasetyenziswa ngokubanzi kwintsimi, i-factory, i-resort, ihotele, ihholo lemiboniso, i-vacationland, izakhiwo zamandulo nezakhiwo zanamhlanje.
Udonga lwama-aluminium kunye nepaneli yecwecwe yokumisa umatshini othengisa yonke ihlabathi njengeGuena, Pakistan, India, Tusnia, Georgia njl. Bathanda udonga lwe-aluminium kunye nepaneli yepaneli yokupaka indlu.
Udonga oluqhelekileyo lweAluminium kunye nepaneli yepaneli yophahla phambi kokuba uqokelele i-coil i-1000mm, ukusetyenziswa kwezinto eziphathekayo eziphambili ze-IPGI. Kwaye emva kokuqulunqwa komda obanzi ububanzi buyi-840mm.
Udonga olupheleleyo lwe-aluminium kunye nophahla lwepaneli lokufaka umgca wendlela yomatshini luquka u-decoiler, umatshini wokumisa umbane, inkqubo yolawulo lwekhompyutheni, i-puncher online kunye ne-table out.